MOL မှ အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ (SMEs) ယဉ်ပြိုင်မှုကိုတိုးမြှင့်၍ ထိုင်းလူမျိုးကျွမ်းကျင်အလုပ်အက
အိမ်စာမျက်နှာ / သတင်း / ข่าวสารรัฐบาล / MOL မှ အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ (SMEs) ယဉ်ပြိုင်မှုကိုတိုးမြှင့်၍ ထိုင်းလူမျိုးကျွမ်းကျင်အလုပ်အက
MOL မှ အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ (SMEs) ယဉ်ပြိုင်မှုကိုတိုးမြှင့်၍ ထိုင်းလူမျိုးကျွမ်းကျင်အလုပ်အကိုင်ကို ဖွံ့ဖြိုးအောင် လုပ်ဆောင်ခြင်း ။ အလုပ်သမားရေးရာဝန်ကြီးဌာနမှ အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများယဉ်ပြိုင်မှုကိုတိုးမြှင့်၍ ကျွမ်းကျင်ထိုင်းအလုပ်အကိုင်ကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် နှင့် စုစုပေါင်း စက်မှုလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု နှင့် ထိုင်းစီးပွားရေးဖြစ်သော “လုံခြုံခြင်း၊ ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝချမ်းသာခြင်း နှင့် အကျိုးရှိထိန်းသိမ်းနိုင်ခြင်း” တို့အတွက် သေချာအောင
အစိုးရရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ မာဂ်ျ. ဂျန်. စန်ဆာန် ကီအွတ်ကန်မ်နာဒ် (Maj. Gen. Sansern Kaewkamnerd) ဘက်မှ အစိုးရက စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဝန်ကြီးဌာနအား လူထုအနေဖြင့် မိုးခေါင်ရေရှားသော နေရာ နှင့် နိုင်ငံတစ်လျောက် ဆည်မြောင်းနှင့်ဝေးသောနေရာတွင် ရေမရရှိမှုကို ကြိုတင်ကာကွယ်ရန် နှင့် အသုံးပြုခြင်းနှင့် ထိန်းသိမ်းခြင်းကို ညီမျှမှုတစ်ခုကို ဖန်တီး၍ အစိုးရ၏ဦးဆောင်ရွက်မှုအရ ရေသုံးစွဲခြင်းနှင့် စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးအတွက် ရေလုံလောက်မှုကို လူထုထံပေါ်နိုင်စေရန်အတွက် “ရေကန်ငယ်လေးများအား စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးလယ်မြေယာ နှင့် ဆည်မြောင်းမြေနေရာ အပြင်ပိုင်းရှိနေရာတွင် တူးဖော်ခြင်း” သို့မဟုတ် “ရေကန်ငယ်လေးများ” စီမံကိန်းကို ဆောင်ရွက်နေပြီ ဖြစ်ပါသည်။
၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင်၊ အစိုးရဘက်မှ ရေကန်ပေါင်း ၂၀၀၀၀ ကျော်ကိုတူးယူရန် ဘတ်ငွေ ၃၅၆ သန်းကို ခွဲဝေ သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ ရေကန်တစ်ကန်လျှင် ဘတ်ငွေ ၂၀၃၀၀ ခန့် ကုန်ကျပြီး၊ အစိုးရမှထောက်ပံ့မှုမှာ ၁၇၈၀၀ ဘတ်ဖြစ်ပြီး၊ လယ်သမားများ (မြေယာပိုင်ဆိုင်သူများ)၏ ကိုယ်ပိုင်ထောက်ပံ့မှုမှာ ဘတ်ငွေ ၂၅၀၀ ဖြစ်သည်။ အောက်တိုဘာလ ၂၀၁၄ မှ စက်တင်ဘာလ ၂၀၁၅ ခုနှစ်အထိ၊ အစိုးရမှ ရေကန်ငယ်ပေါင်း ၅၆၂၀၆ ကန်ကို တူးယူခဲ့သည်။ ၎င်းရေကန်များမှာ ၁၂၆၀ cbm ရေအနက်အထိရှိသောကြောင့် ရေသောက်သုံးမှု၊ အိမ်ထောင်စုအသုံးစာရိတ်ကိုဖြတ်တောက်ရာတွင်အထောက်အကူပြုသော ငါးမွေးမြူရေး၊ နှင့် ရေကန်အနီး အိမ်စားဟင်းသီးဟင်းရွက်ခြံများစိုက်ပျိုးမှုအတွက် အဆင်ပြေပါသည်။
“ဝန်ကြီးချုပ်က လူထု၏နေထိုင်ရေး၊ အထူးသဖြင့် မိုးခေါင်ရေရှားဒဏ်ခံနေရသော ဆည်မြောင်းနေရာအပြင်ပိုင်းမှ လူထုများအကြောင်းကို ပူပင်နေပါတယ်။ ရလဒ်တစ်ခုအရ၊ သူ့အနေဖြင့် စီမံကိန်းအပေါ်တိုးတက်မှုကို ပုံမှန်လိုက်လေ့လာခဲ့ပြီး သောက်သုံးရေ နှင့် စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးအတွက် လူထုအနေဖြင့်လုံလောက်သောရေရရှိမှုကိုသေချာစေရန် ၎င်းစီမံကိန်းကို အမြန်ဆုံးပြီးဆုံးသွားရန် တာဝန်ရှိကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းများကို အလေးထားနေပါသည်။ ကျတော်တို့ဘက်မှလည်း ဒေသတိုင်းရှိ ရေရှည် မိုးခေါင်ရေရှားမှုကို တားဆီးရန် စီမံကိန်းကိုလည်း ဆက်လက်လုပ်ကိုင်သွားပါမယ်။”
အစိုးရဘက်မှနေပြီး မိုးခေါင်ရေရှားမှုကိုတားဆီးရန် တော်ဝင်မိုးရွာသွန်းမှုဆုတောင်းခြင်းဖြင့် ရေကာတာတွင် ရေများ လာအောင်လုပ်ခြင်း၊ Monkey’s Cheeks စီမံကိန်းဟုခေါ်သည့် ရေကိုတစ်နေရာတွင်ထိန်းသိမ်း၍ သုံးစွဲခြင်းနှင့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လိုက်လျော်ညီစွာဖွဲ့တည်မှုစနစ်အားထိန်းသိမ်းခြင်းအတွက် ရေဖြန့်ဝေပေးခြင်း၊ နှင့် နိုင်ငံတစ်လျောက် ရေကန်ငယ်များတူးဖော်ခြင်းစသည့် တိုင်းတာမှုမျိုးစုံကို စီစဉ်အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သော်လည်း အရေးအကြီးဆုံးအချက်သည် လူထုမှ ရေ၏အရေးပါမှုကိုသိရှိစေခြင်း ဖြစ်သည်။ ကျတော်တို့အနေဖြင့်သိရမှာက နိုင်ငံအတွင်းရှိသည့် ရေပမာဏသည် မိုးရေပမာဏအပေါ်မူတည်သည်ကို နားလည်ရန်လိုအပ်သည်။ ပြီးနောက်၊ ရာသီဥတုအပြောင်းအလဲမှာလည်း မိုးရွာသွန်းမှုကို လျော့နည်းစေသောကြောင့် ရေကာတာ နှင့် အခြားတောင်ကျရေတို့မှာလည်း လျော့နည်းလာကြပါသည်။ ကျတော်တို့အနေဖြင့် လူထုကို ရေဖြုန်းတီးမှုကိုရှောင်ကြဉ်ရန် နှင့် ရေကိုစုဆောင်းကြရန် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို တောင်းဆိုပါသည်။ ကျတော်တို့အနေဖြင့်လည်း လယ်သမားများက အနာဂတ်တွင် မိုးခေါင်ရေရှားမှုအန္တရာယ်ကို သက်သာစေရန် ရေလောင်းပမာဏနည်းသည့် သီးနှံစိုက်ပျိုးမှုကို ပြောင်းလဲလိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။
ဖနျတီးသူ - Supawan Sittipanya (01-07-2019 15:35:48)